‘किवी गाउँका रुपमा चिनिन्छ खतिवडा बस्ती’ – Sourya Online
टीका खतिवडा २०७७ असोज १२ गते १५:११ मा प्रकाशित
इलाम । सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्ने धेरैको रहर हुन्छ । अझ सरकारी जागिरमा स्थायी नै हुन पाए जीवनमा धेरै दुःख गर्न नपर्ने हामी धेरैको बुझाइ पनि छ । तर हाम्रो देशमा अहिले पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कृषि पेशामा नै रहेको भए पनि कृषकको सम्मान र यस पेशा प्रतिको आकर्षण भने घट्दो छ । जसका कारण बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतबारीमा काममा खट्ने या दैनिक गाईवस्तुको स्याहार गर्ने मानिसको कमी हुँदै गएको छ । तर इलाम सन्दकपुर गाउँपालिकाका तारामणि खतिवडा भने यो मान्यताभन्दा पृथक हुन ।
उनी सरकारी जागिर छोडेरै व्यावसायिक कृषि पेशामा संलग्न भएका छन । खतिवडाले सर्वोच्च अदालतको जागिर छोड्दा धेरैले बिग्रियो पनि भने । नायब सुब्बा पदमा कार्यरत उनले जागिर छोडेरै किवी फल खेतीमा लाग्ने सोच बनाए । विसं २०६४ देखि सो खेतीमा लागेका उनले जागिरबाट भन्दा धेरै आम्दानी गरेको बताए ।
‘ऊ बेलाको नायब सुब्बा पद बढेर हाल माथिल्लो पद पुगिन्थ्यो होला, कमाई पनि मासिक रु ५० हजारको हाराहारीमै हुन्थ्यो होला, तर त्योभन्दा धेरै माथिको छ मेरो अहिलेको कमाई’, उनले भने । कृषक खतिवडा आफूमात्र नभएर सो पेशामा धेरैलाई संलग्न गराएका छन । शुरुमा किवी फल के हो ? यो कहाँ राम्रो फल्छ ? भन्नेसम्म जानकारी नपाएकाहरुले हाल व्यावसायिकतासँगै राम्रो आम्दानीको स्रोतसमेत बनाएका छन् ।
काठमाडौंमा सरकारी जागिर छोडेर खतिवडाले ललितपुरमा नै कृषिमा काम गर्ने सोच बनाए तर पछि भने आफ्नै जन्मथलोमा फर्किएर कृषि कर्ममा लागेको उहाँ बताउनुहुन्छ । हाल सोही पेशामा आफ्ना भाइ, भतिजहरुलाई पनि संलग्न गराउनु भएको छ । सँगैका दाजुभाइ एवं गाउँलाई नै किवीमय बनाउने काममा उहाँकै हात रहेको सन्दकपुर तिनका ठाकुर खतिवडाको भनाइ छ ।
विसं २०७३ मा सर्वोच्च अदालतबाट कार्यालय समयभन्दा केही समयअगाडि निस्किएर पसलमा जाँदा नयाँ फल देखेपछि उनले रु २२५ मा तीन दाना किवी खरिद गरेको बताए । फल मीठो भएपछि अर्को दिन सोही ठाउँमा गएर किवी लिएर आउनुभयो र यससम्बन्धी जानकारी खोज्न थाले । इन्टरनेट र विभिन्न माध्यमबाट किवीसम्बन्धी जानकारी खोजी लिएर जन्मथलो फर्किएका उनी गएको दश वर्षदेखि यही खेतीमै छन ।
सन्दकपुर गाउँपालिका–३ तालगाउँमा करीब ५० घरपरिवार खतिवडाको बस्ती छ । साबिक सुलुबुङ्ग गाविस–५ मा तीन घरबाहेक सबै परिवार खतिवडाकै बस्ती छ । पहिले खतिवडा बस्ती भनिने यो तालगाउँलाई आजकल किवी बस्तीको नामले पनि चिन्न थालिएको छ । किवीलाई इलाममा तारामणि खतिवडाले नै भित्र्याएका भने होइनन । तर किवीलाई एक ब्रान्डका रुपमा विकास गर्न उनको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
किवीका बिरुवा, दाना र प्रशोधन गरिएका वस्तुहरुबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको किसान ठाकुर खतिवडाको भनाइ छ । उनले यस वर्ष बेच्न करीब १० लाखका बिरुवा ठिक्क पारेको बताए । किवी र त्यसबाट बनेका परिकार ‘धरानमा इलाम’ नामक एक कार्यक्रममा बिक्री गरेपछि हौसला प्रदान भएको बताए । विगत वर्ष धरानमा किवी र यसका परिकार बेच्न थालेपछि लकडाउनकै बीचमा पनि धेरै फोन आएको उनले बताए । यस वर्ष आफैँ जानु नपर्ने र फोन सम्पर्कबाट नै धेरै बिक्री गर्न सकिने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनले घरमै बसेर किवी बेच्न सकिने बताए ।
सोही ठाउँमा रुद्र खतिवडाले गएको वर्ष १० लाखभन्दा बढीको बिरुवामात्र बेचे । उनले यस वर्ष विगतभन्दा दोब्बर बिरुवा बेच्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ । उनको समय किवीको स्याहारसुसारमा नै बित्ने गरेको छ । कोरिया जाने लक्ष्यका साथ कोरियाली भाषा पढे पनि अब कोरिया जति कमाई नेपालमा नै बसेर गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनी घरमै बसेर कमाउन सक्ने भएपछि किन विदेश जानु भनेर प्रश्न गर्छन ।
किवीको बिरुवा प्रतिगोटा रु एक सयदेखि तीन सयसम्म पर्दछ । जातअनुसार बिरुवाको मूल्य फरक पर्ने किसानको भनाइ छ । किवी बहुवर्षे बिरुवामा पर्छ । एक पटक रोपेपछि २० वर्षभन्दा बढी आम्दानी लिन सकिने यससँग संलग्न किसानको भनाइ छ । किवी खेती बढ्दै गएपछि सरकारले सन्दकपुर गाउँपालिकामा किवी जोन नै घोषणा गरेर यस खेतीलाई विस्तार गर्ने काम गरिरहको छ । किवी जोनमार्फत किसानले अनुदानमा उपकरण र बिरुवा पाउने गरेका छन् ।
इलाममा उत्पादित किवीका बिरुवा नेपालभर नै बिक्री भइरहेको छ । नेपालमा प्रायः एलिसन, हेवार्ड, रेड (रातो) किवी मन्टी, सोयु ब्रुनोलगायत जातका किवी पाइन्छन् । जातको किव समेत पाइने गरेको छ । किवीबाट किसानले फल र बिरुवाबाट उत्तिकै आम्दानी लिने गरेका छन् । दुवैबाट उत्तिकै आम्दानी हुने भएपछि पनि किसानले यसको व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन् । लहरा प्रजातिको किवीको सामुद्रिक सतहदेखि एक हजार ४०० मिटरदेखि दुई हजार ५०० मिटर उचाइको भूगोलमा खेती गर्न सकिने बताइएको छ ।
किवीलाई नेपालमा महङ्गो फलका रुपमा लिइन्छ । शुरुमा प्रतिकिलो रु छ सयदेखि एक हजारसम्म किनबेच भएको किवी हाल सस्तो बन्दै गएको छ । हाल प्रतिकिलो रु डेढ सयदेखि तीन सय सम्ममा किनबेच भइरहेको छ । एउटै फलमा धेरै फलफूलको स्वाद पाइने र धेरै पौष्टिक तत्व पाउन सकिने भएकाले यो फलको महत्व बढेको किसान बताउँछन् । अण्डा आकारको यो फल लहरामा झुण्डिएर फल्दछ । एकथरी किवीमा बाहिर झुसजस्तो हुन्छ भने रातो किवीको बोक्रा भने चिल्लो हुन्छ । काट्दा भित्र हल्का हरियो भएको किवीलाई ‘ग्रिन’ अर्थात् हरियो किवी भनिन्छ । काट्दा भित्र रातो देखिने किवीलाई ‘रेड’ किवी भनिन्छ । रेड किवी दुई वर्षअघि देखि मात्र नेपालमा पाउन थालिएको हो । किवीमा गुलियो र अमिलो स्वादको मिश्रण पाइन्छ । पोषिलो र औषधीय गुण रहेको र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भएकाले पनि यो फल नेपालमा लोकप्रिय बन्दै गएको किसान बताउँछन् । – रासस